Valan-javaboahary Ranomafana: sarihina hiaro ny varika ny mpizahatany | NewsMada
Anisan’ny arovana manokana ao anatin’ny valan-javaboaharin’i Ranomafana ny karazana varika Hapalémur (Prolemur simus), tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Anisan’ny paikady hanohanana ny fiarovana azy ny fisarihana ny mpizahatany any ivelany.
Fandaharanasa iraisam-pirenena entina hiarovana ny karazana varika, ny Hapalémur, na ny Prolemur simus, ny Helpsimus, antsoina hoe “Bamboo lemur”. Voakasik’izany ny valan-javaboahary Ranomafana any Atsimo Andrefan’ny Nosy.
Miara-miasa aminy ny Vondrona mpandalina sy mpikaroka mikasika ny varika eto Madagasikara (Gerp), misahana ny fanaraha-maso sy ny fikarohana siantifika, andaniny, sy ny fikambanana tsy miankina, ny ONG Impact, miandraikitra ny fampandrososana any ifotony mifandrindra amin’ny fiarovana ny varika.
Filoha mitarika ny Fandaharanasa Helpsimus Rtoa Delphine Roullet, manampahaizana manokana mikasika ny hapalemur, ary anisan’ny sahaniny ny fanentanana ny mponina any amin’ny kaominina Tsaratanana, any Ranomafana, hahay miara-monina amin’ny varika. Entaniny ny vahiny mpizahatany, hitsidika any an-toerana, hahita maso ny fiainan’ny varika anaty ala, sady mandray anjara amin’ny fiarovana azy ireo rahateo.
Manampy amin’ny fiarovana ny fiparitahan’ny entona karbôna CO2, kajina ho 2,69 t isan’olona (2 850 euros = 11,4 tapitrisa Ar) koa ny fahatongavan’ny mpizahatany iray any an-toerana, izany hoe, ny saram-pitaterana. Takalon’ny fanapariahan’ny firenena indostrialy, mpanaparitaka ny CO2, entona manimba ny tontolo iainana ny tsena karbôna.
Eo amin’ny lafiny fampandrosoana sy fanampiana ny mponina, maherin’ny 600 ny fitaovam-pianarana nozarain’ny tetikasa Helpsimus ny mpianatra ao amin’ny EPP Sahofika, ao Vohitraivo, ao Ambodimanga, ao Ambodigoavy ary ao Ambohipo any amin’ny kaominina Tsaratanana ao amin’ny faritra arovana Ranomafana. Aloan’ny tetikasa ny ampahan’ny karaman’ny mpampianatra enina amin’ireo sekoly dimy ireo, misahana ny fanabeazana momba ny tontolo iainana ho an’ny mpianatra. Notokanana, ny volana oktobra teo, koa ny sekoly iray vaovao.
Tafiditra ao anatin’ny lisitry ny Fiombonambe iraisam-pirenena misahana ny tontolo iainana (IUCN), ho karazam-biby ahina ho lany tamingana, ny varika Hapalemur, nanomboka ny taona 1996. Miaina anaty ala mando, manana haavo 100 hatramin’ny 1 650 m, ahitana ala volontsangana sady sakafo tena fihinany, miampy voankazo sy zavamaniry samihafa (letisia, kafe, fary, …). Miisa 12 ny karazana varika any Ranomafana, tombanana manodidina ny 1 000. Arahi-mason’ny tetikasa Bamboo lemur ny 300 amin’izy ireo, ahitana fianakaviana 10.